ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » Breaking ခရီးသွားသတင်းများ » COVID-19 စိတ်ကျရောဂါ? နီပေါခရီးကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • LGBTQ • နီပေါ Breaking News • သတင်း • လူပုဂၢဳိလ္မ်ား • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • သတင်းမျိုးစုံ
နီပေါနိုင်ငံသို့ခရီးသွားခြင်းသည်နီပေါနိုင်ငံရှိ Mout Everest ကိုတက်ခြင်းထက်မက ပို၍ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နိုင်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူသုံး ဦး တွင်တစ်ယောက်သည် COVID-19 အကျပ်အတည်းအတွင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများကြုံတွေ့နေရသည်။ မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေခြင်း၊ စိတ်ငြိမ်သက်မှုရရှိခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအလားအလာရှိခြင်းစသည်တို့ကိုလေ့လာခြင်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းခေတ်သစ်အတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်သည်ဆိုလိုသည်။ Lord Budda သည်၎င်းကိုကူညီနိုင်ပြီးနီပေါသည်မွေးရပ်မြေဖြစ်သည်။
နီပေါနယ်စပ်သည်လက်ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ပိတ်ထားချိန် မှစ၍ စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်။ အတည်မပြုရသေးသောအစီရင်ခံစာများအရအောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နောက်ပိုင်းတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်
သူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းသို့သွားရောက်ကာမိမိ၏အတွင်းပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လူမှုရေးအရဝေးကွာသွားသောအခါပန်ကဂျ Pradhananga သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှနေသည်။
Pankaj Pradhananga သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်။ သူသည် CRM (စျေးကွက်ရှာဖွေရေး) အထူးပြုနှင့်ကတ္တမန္ဒူတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှုကျောင်း (KUSOM) မှ MBA ဘွဲ့ရရှိထားသည်။
သူသည် Four Season Travel & Tours ၏ဒါရိုက်တာ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆရာများအသင်း၏ပClubိညာဉ်စာတမ်းဥက္ကPresident္ဌ၊ ခရိုင် ၄၁ ရှိ A6 ၏Directorရိယာညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ကက်မတ်မန်ရှိ ACE စီမံခန့်ခွဲမှုအင်စတီကျုတွင်တွဲဖက်ထားသောဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ဟိမ ၀ န္တာဒေသရှိ Inclusive Tourism အစပျိုးမှု၏ရှေ့ဆောင်ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သည်။ သူသည်တာ ၀ န်ရှိသည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကွန်ဖရင့်များတွင်စကားပြောခဲ့ပြီးနီပေါ၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင် Guest ည့်ဟောပြောပို့ချချက်များပေးခဲ့သည်။ '
Pankaj သည် to ည့်သည်သည်စူးစမ်းလေ့လာရန်အလွန်ဆာလောင်နေသည့်အရာတစ်ခုကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပိုက်ဆံများစွာကုန်ကျစရာမလို။ Pankaj အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ
Namaste နှင့် Aloha။ ကျွန်တော့်နာမည် Juergen Steinmetz ပါ ငါသည်သင်တို့ကိုဟာဝိုင်ယီ, ဟိုနိုလူလူတွင်ခရီးသွားရင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းမှလွှဲပြောင်းပေးသည်။ ငါနဲ့ငါ့သူငယ်ချင်းကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသိခဲ့ပြီ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်ကြီးရွယ်အိုများဟုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပန်ဂျီကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သင်သိခဲ့ပြီးပါပြီ။ သင်၏နောက်ဆုံးနာမည်ကိုအသံထွက်မထုတ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုမင်းရဲ့နောက်ဆုံးနာမည်ပြောပြမယ်။ ဒါပေမယ့်သူကငါတို့ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအနှစ်သက်ဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ကိုလာခေါ်တာပါ။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုနီပေါနိုင်ငံကပါ။ life ၀ ရတ်တောင်ကိုတခါမှမမြင်ဖူးဘူးဆိုတာဝန်ခံရဖို့သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်ကြည့်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတကယ်ပြန်လာဖို့ပြန်လာဖို့ဆက်လုပ်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလေယာဉ်ကနေမြင်တယ်။
ဒီတော့ဒါကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်နီပေါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဟာကမ္ဘာ့အခြားဒေသများမှာအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားတယ်။ Pankaj သည် Four Seasons ခရီးသွားအမည်ဖြင့်ခရီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်အမေရိကန်ခရီးသွားများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက COVID နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားအရာအားလုံးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့နီပေါကိုသွားဖို့အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ထို့အပြင်တောင်တက်ခြင်းအားလုံးကမလုံလောက်ပါ။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူကိုယ်တိုင်နှင့်နီပေါနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းမှမိမိကိုယ်ကိုရှာဖွေခြင်းနည်းလမ်းသစ်အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြလိမ့်မည်။
Aloha Mahalo ။ ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သင်နီပေါနိုင်ငံကိုအကြိမ်ကြိမ်လာခဲ့ပေမယ့် rest ၀ ရက်တောင်ကိုမတွေ့ရပါ။ ဒီအချက်က ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ နယူးယောက်ခ်သတင်းထောက်၊ me ၀ ရတ်တောင်ကိုတက်ဖို့တတိယအကြိမ်ကြိုးစားမှုအတွက်ပြင်ဆင်နေတာကိုသတိရစေတယ်။ ၁၉၂၃ Eve ၀ ရတ်တောင်ကိုတက်ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမေးတဲ့အခါသူကအဖြေကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ သူကအဲဒီမှာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သုံးစကားဖြင့်သူကပြောသည်။ Mallory ကကျွန်တော်ဟာအကောင်းဆုံးတောင်တက်သမားဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အတ္တကိုကျေနပ်အောင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပထမဆုံးလူစားဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ သူက“ ငါ said ၀ ရတ်တောင်တက်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီဝါကျဟာများစွာသောစူးစမ်းရှာဖွေသူများ၊ ရှာဖွေသူများ၊ စွန့်စားရသူစွန့် ဦး တီထွင်သူများအတွက်လမ်းညွှန်တဲ့ဂါထာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်နီပေါဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စကိုဟိမဝန္တာအရေးကိစ္စဟာဘာကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်တယ်။ သင်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အဲဒါဟာများစွာသောလူတို့အတွက်အတွင်းပိုင်းခရီးစဉ်၏အလားအလာအစဖြစ်နိုင်တယ်၊ ကံမကောင်းတာကတော့ ၁၉၂၃ ခုနှစ်မှာဒီတောင်တက်သမားကတတိယကြိုးပမ်းမှုမှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
သူသည်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်သူ၏အလောင်းကိုမတွေ့မချင်းသူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခရီးသွားခြင်း၏သမိုင်းကိုကြည့်ပါကရှေး ဦး အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်လူနေမှုကိုသာပိုင်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲခရီးသွားခြင်းအတွက်ဘုရားဖူးသွားရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူများသည်မက္ကာသို့ထွက်ခွာသွားသည်ဖြစ်စေ၊ ယနေ့အချိန်၌ Lord Seba သို့မဟုတ် Kellogg တောင်တန်းသို့သွားသောမည်သူ့ကိုမဆိုတိဘက်လူများသည်ပိုမိုကြီးမားသောဘဝအဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေရန်ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါဘုရားဖူးသည်သို့မဟုတ်လွှတ်ပေးရန်ခရီးအဖြစ်။ ဒီတော့ကံကြမ္မာနေရာတွေဟာအများကြီးပိုလွယ်လာတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, COVID-1999 ၏အချိန်အတွက်လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပိုလွယ်သွားတယ်။ လူများသည်ဘာသာရေးခရက်ဒစ်များကိုခရီးထွက်နိုင်ပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂,၅၀၀ နီးပါးကဆိုကရေးတီးပြောခဲ့တာကိုငါတို့ရှာနေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တကယ်ရှာဖွေတဲ့အခါ၊
ဒါကြောင့်ငါတွေးမိလေ့ရှိသည့်အချိန်များတွင်မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိကသို့မဟုတ်ဥရောပကဲ့သို့ဝေးလံသောဒေသများမှလာသည်ဖြစ်စေဟိမဝန္တာသို့လာရောက်သူများအတွက်ခရီးစဉ်များစီစဉ်ခြင်းခရီးတွင်လူများစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ သူတို့မှာပိုကောင်းတဲ့လမ်းတွေ၊ ပိုကြီးတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်နီပေါမှာဒါမှမဟုတ်ဟိမဝန္တာမှာဘာရှာနေတာလဲ။ ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့နဲ့ငါခရီးသွားတဲ့အခါနားလည်လာတယ်၊ ၎င်းသည်မျက်စိမမြင်နိုင်သောအရာမျှသာမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်မျက်စိဖြင့်မမြင်ရသောအရာများကိုမြင်ရန်သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်မထိရသေးသောစွမ်းအင်ကိုတွေ့မြင်ရန်ဒီသို့လာကြသည်။ ပြီးတော့မင်းသွားမယ်လို့ငါပြောနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်၊
လူများသည်၎င်းတို့တည်ရှိကြောင်း၊ မသိရှိခဲ့ကြောင်းကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့ရောက်လာသည်နှင့်အမျှနံနက်အချိန်များ၊ တောင်ပေါ်များတွင်သာမကကတ္တမန္ဒူလမ်းများ၌ပင်ဘုရားသခင့်အရာတစ်ခုခုရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ COVID မပိတ်ခင်လေးမှာတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဒါကသတိပေးတယ်။ သူမသည်အသက် ၇၀၊ ၇၅၊ ၇၆၊ ထိုအချိန်ကဆရာဝန်ဆရာဝန်၊ ဆရာဝန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူဟာ Mondo ဆီကိုအပတ် ၂ ပတ်နီးပါးခရီးသွားပြီးဟိုတယ်တစ်ခုသို့ရောက်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်သူသည်aည့်သည်ပုံစံများ၊ ကြွေးရှင်နေရာအတွက်နှင့်နှစ်ရက်သာဟိုတယ်တစ်ခုမှထွက်ခဲ့ပြီး Kathmandu အနီးရှိ Hill သို့သွားခဲ့သည်။ ထိုအခါငါသူမကို Katmandu မှဆောင်တတ်၏နှင့်တူခရီးစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်ခု site ကိုအရာလုပ်နေတာကတည်းကတော်တော်လေးစပ်စုခဲ့သည်။ ဒါနဲ့သူမက Parton မှာရှိနေတုန်းသူမကိုတွေ့ဖို့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုဖိတ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့မင်းကို Katmandu ကိုဘာကြောင့်ခေါ်လာတာလဲ၊ ဘာကြောင့်ဒီလောက်ခရီးမသွားတာလဲ၊ မိန်းမက၊ ငါဒီနေရာကိုအကြိမ်များစွာလာခဲ့တယ်၊ ထိုအခါငါပြန်လာလာ။ ဖြစ်ကောင်းဤငါ၏နောက်ဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ နီပေါကိုသာမကဥရောပမှထွက်ခွာသွားခြင်းကငါစိတ်သက်သာရာရစေသည်။ ထိုအခါငါဖြစ်ကောင်းသောအခြိနျကာလ၌ရှည်လျားသောခရီးစဉ်ပျံသန်းမှုကိုစီးနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါကြောင့်နေဆဲခြိမ်းခြောက်မှုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူမကသူမပြောတာကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးစဉ် (သို့) ခရီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကအရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဒီကိုလာပြီးနီပေါနိုင်ငံကိုသွားတဲ့ခရီးတွေအများကြီးကလူတွေပျော်ရွှင်မှုကိုမစောင့်ဆိုင်းရသေးတဲ့တောင်တန်းတွေ၊ ကတ္တမန္ဒူလမ်းတွေပေါ်မှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ထိုအခါငါမေးတယ်, ဒါကြောင့်သင်ပျော်ရွှင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းမနေနှင့်ပတ်သက်။ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ပြီးတော့သူတို့က "အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်စေ၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးယဉ်ကျေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်စေပျော်ရွှင်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုတာလူတွေကိုငါမြင်တယ်။ ပျော်ရွှင်မှုကိုဝေးလံတဲ့အနာဂတ်မှာတစ်နေရာရာမှာမဟုတ်ဘဲအခုအချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းရဲ့ကယ်တင်ခြင်းပဲ။ အဲဒီမှာတစ်သက်တာ၏အားလပ်ရက်ကိုစောင့်ပါ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကားများပျော်ရွှင်ဖြစ်လာဖို့စောင့်ဆိုင်းချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Katmandu မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကသူတို့ဘယ်မှာရှိရှိ၊ ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိသူတို့ပဲပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ ပြီးတော့ငါပျော်ရွှင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူတွေကိုမတွေ့ဖူးဘူး။ ပြီးတော့ငါကအရမ်းနက်ရှိုင်းသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်ခံစားရတယ်။
ဤမိန်းမသည်အကျွန်ုပ်ကိုဤအရပ်သို့ပို့ဆောင်ပါပြီ။ တကယ်တော့လူတွေကနီပေါနိုင်ငံကိုလာကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်တောင်တန်းတွေတောင်မှတောင်ရှိတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်၊ ဟိမဝန္တာဒါမှမဟုတ် rest ၀ ရတ်တောင်အာရုံစူးစိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာပြည့်ဝသောဒြပ်စင်ရရှိပါသည်။ လူတွေကိုနီပေါဒါမှမဟုတ်ဟိမဝန္တာဒေသကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာရှိနေတာတောင်သူတို့ထက်တောင်ပိုတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကလူတွေကြောင့်ပြန်လာနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်ကိစ္စတော်တော်များများမှာ, ၀ ရတ်တောင်ခြေစခန်းကနေဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းယူဖို့ဒါမှမဟုတ်နီပေါနိုင်ငံကိုလာတဲ့ခရီးသည်တွေဟာခြေရာခံတဲ့ခရီးကိုသွားတာကိုငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ် သို့သော်ခရီးစဉ်အဆုံးတွင်အများစုသည်ဓာတ်ပုံများထက်မကယူကြသည်။ သူတို့ကဒီအတွေ့အကြုံထက်ပိုယူပါ။ များသောအားဖြင့်သူတို့သည်ယနေ့ခေတ်သက်တောင့်သက်သာမရှိသောလက်ဖက်ခြောက်အိမ်များတွင်အခြေခံကျသောဆုံးရှုံးမှုများ၌ဆက်လက်နေထိုင်စဉ်သို့မဟုတ်ထိုဒေသတွင်းလုပ်ရိုးရှင်းသောဆန်နှင့်ပဲဟင်းဖြစ်သော Dalbar ဖြစ်သည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များ။ ပြီးတော့အဲဒီအာဟာရလေးခုကိုနွေးထွေးပြီးခံစားမှုများစွာနဲ့ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားတာကိုသူတို့တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေသူတို့ကိုသဘောပေါက်ပေးသည်။ ပြီးတော့အများကြီးပုံပြင်များရှိခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်မကြာသေးမီကပြောပြနိုင်လျှင်များစွာသောသူတို့မှာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ထိပ်တန်းအမှုဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူသည်သြစတြေးလျအခြေစိုက်အာရှ၊ ပစိဖိတ်ဒေသတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူ၏အလုပ်မှအနားယူခဲ့သည် ခြောက်နှစ် frantally အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? သူကပဲကျောပိုးအိတ်ဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူကပဲသူ့ကျောပိုးအိတ်ကိုယူ
Armando ဆီသို့ ဦး တည်။ သူသည်လေယာဉ်ပျံတစ်စင်းကိုယူဆောင်ခဲ့ပြီး Kathmandu သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်သူသည်ခြေထောက်ပေါ်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ၏တောင်ပေါ်တွင်ရှိနေသည်။ ထို့အပြင်သူသည်ဘီစီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်ဒေသခံများနှင့်အဆက်အသွယ်ရခဲ့သည်။ သူသည်ပတ်ပတ်လည်သို့တက်နေစဉ်သို့မဟုတ်ပတ်ပတ်လည်သို့ ဦး တည်နေသည်။ သုံးပတ်လောက်ကြာသောပြိုင်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေသည်။ ပြီးတော့သူကဒေသခံလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့စကားပြောနေတာ၊ သူကအဲဒီလိုထပ်ဆင့်လွှင့်သူမျိုးကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး၊ ပြီးတော့သူကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒေသခံကျောင်းကဘယ်လိုပုံစံလဲ။ ကံကောင်းထောက်မစွာသူသည်လူတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူသည်ထိုဒေသရှိကျောင်းများအတွက်အရင်းအမြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူကစစ်ဆေးရေးခရီးစဉ်မှာရှိနေတယ်။ ဒီတော့သိချင်စိတ်ကလူကြီးလူကောင်းကိုလှုံ့ဆော်သည်။ ငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတာတောင်တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုကြည့်ချင်လို့ပါ။ သူကကောင်းပါတယ် သငျသညျအကြှနျုပျကိုနံနက်ယံ၌ခြောက်နာရီမှာငါ့ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းပါကလမ်းပေါ်မှာမှန်ကန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်ကငါနှင့်ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီလူကြီးလူကောင်းဟာနီပေါအစိုးရရဲ့တရားဝင်ပညာရေးအရာရှိကိုအကြောင်းပြချက်နောက်လိုက်ဖို့နံနက်စောစောထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ ငါတို့ရဲ့အချိန်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဟာကျောင်းမှာရှိခဲ့တယ်၊ သူရဲ့မယုံသင်္ကာဖြစ်ခဲ့တာကအနောက်တိုင်းကမ္ဘာမှာသူတစ်ခါမှမတွေးဖူးတဲ့ကျောင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အဟောင်းထုပ်ပိုးကြမ်းပြင်လေးတွေစန်ဒရာကဲ့သို့၎င်း, သေတ္တာထဲမှာ? အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိသွပ်များ။ ဒါပေမဲ့သူတို့အဲဒီကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါကလေးတွေအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ သူတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်နှုတ်ဆက်ကြသည်။ မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအဖြစ်, အင်္ဂလိပ်ဖိုင်ထဲမှာဆုံးမisဝါဒပေး။ ဒါကြောင့်မူလတန်းကျောင်းကနေ။ ဒါကြောင့်သူကတော်တော်လေးသဘောကျသွားပြီးကျောင်းအုပ်ကြီးကခရီးလှည့်လည်ခဲ့တယ်။ သို့နှင့်သူသည်အတန်းအနည်းငယ်ကိုသာတွေ့ခဲ့သည်၊ ကလေးတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ အဆုံးမှာတော့သူကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သောက်ဖို့ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းကမြို့ထဲမှာဒါမှမဟုတ်တောင်၊ တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ polyatomics တွင်းကိုသွားဖို့နေရာတိုင်းမှာကမ်းလှမ်းပါတယ်။
ဒါကြောင့်သူ့ကိုလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ပေးပြီးသူကြည့်လိုက်တော့စာအုပ်တစ်အုပ်တည်း၊ စာအုပ်တစ်အုပ်တည်းမတွေ့ရသေးတဲ့အချိန်အထိသူကတော်တော်လေးသိချင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူကကျောင်းအုပ်ကိုမေးတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်မှာစာကြည့်တိုက်ရှိသလားဒါမှမဟုတ်စာအုပ်တွေရှိသလား။ အေးဟုတ်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုအခါသူကအော်နှင့်သုံးမိနစ်ကြာပြီးနောက်ဆရာလာ၏။ ကျနော်တို့နောက်ကျောကြီးမားတဲ့ backlog ဖွင့်လှစ်နှင့်အတူသတ္တုသေတ္တာတစ်စည်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ စာအုပ်အနည်းငယ်၊ Cracker အချို့ကျန်ခဲ့သည့်အထီးကျန်နေသောဂြိုဟ်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုထုတ်ယူခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကအနမ်းပါသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာဖုံးတွင်ကလေးများအတွက်မသင့်တော်သောအရာဖြစ်သည်။
ငါ crusty ဝတ္ထုတယ်။ ပြီးတော့သူကဆိုဗီယက်ယူနီယံနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအရှေ့ဂျာမနီတည်ရှိရာကမ္ဘာမြေပုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြေပုံတစ်ခုကိုထုတ်ယူခဲ့တယ်။ ဟုတ်တယ် သူတို့ကဒါဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြ, သူ၏စိတ်နှလုံးနစ်မြုပ်လုံခြုံစွာသော့ခတ်။ သူမယုံနိုင်ဘူး။ ထိုအရာသည်သူ၏အရာတွေအများကြီးကိုပေးတော်မူ၏။ သူကကျောင်းအုပ်ကြီးကိုပြောတယ်၊ မင်းကိုမင်းစာအုပ်အနည်းငယ်ပို့လိုက်ရင်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာလား။ ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်း“ အိုး၊ ငါတို့ကြိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေကြားမှာစာဖတ်ခြင်းအလေ့အထကိုသင်ကြားချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သူကလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကသူ့ Trek ထွက်ခွာသည်။ သူသည်သူ၏ခရီးစဉ်ကိုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့သူငယ်ချင်းတွေဆီအီးမေးလ်တစ်စောင်တောင်းခဲ့တယ်။ မင်းမှာကျောင်းကလေးတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့စာအုပ်တွေရှိရင်၊ သူကသြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ယူအက်စ်မှာရှိတဲ့သူ့အလုပ်ကိုသူပြန်သွားတဲ့အမေရိကန်ရှိငါ့အိမ်ကိုပို့ပါ။ တစ်လနှစ်လကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာဖခင်ဆီကအီးမေးလ်တစ်စောင်ရခဲ့တယ်၊ စာအုပ်တွေအားလုံး ၅၊ ၁၀၊ စာအုပ်တွေပြည့်နေတယ်။
ဒီတော့စိန်ခေါ်မှုကဒီစာအုပ်တွေကိုနီပေါနိုင်ငံကိုဘယ်လိုရောက်အောင်ပို့ရမလဲဆိုတာပဲ ထိုရွာသည်အသံ [inaudible] ၌ရှိသော်လည်း၊ သူသည်အဆက်အသွယ်များကို သုံး၍ ထိုစာအုပ်များကိုသူ၏လမ်းညွှန်သို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ သူကကျောင်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်၊ ငါတို့စာအုပ်တွေယူလာမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့ဆွဲဆောင်သူပြန်လာပြီ ပြီးတော့စာအုပ်တွေကိုသာလွှဲပြောင်းချင်တယ်။ သို့သော်သူသည်ရွာနှင့်အလွန်နီးကပ်လာသောအခါကြီးမားသောအခမ်းအနားများကျင်းပနေသည်ကိုသူတွေ့လိုက်ရသောအခါသူအံ့သြသွားသည်။ ဂိတ်စ်သည်ငှက်ပျောပင်များ၊ သူ့အတွက်ပန်းကုံးများ၊ တေးဂီတနှင့်ဒေသခံဂီတများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ရွာတစ်ရွာလုံးသည်သူ့ကိုရွာသူရွာသားများအားခေါ်ဆောင်လာရန်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဒေတာဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အနေဖြင့်သူသည်ဇိမ်ခံကားများဆုံးဇိမ်ခံဟိုတယ်များကိုရာသီအလိုက်လေးကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ဖူးသည် (သို့) သင်က၎င်းကိုအနီရောင်ကော်ဇောဟုခေါ်သည်။ သူသည်နွေးထွေးသောခံစားမှုခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ စစ်မှန်သော hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံအားစာအုပ်များမှဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးသူသည် Garth အစုအဝေးသို့ပြန်လည် ဦး တည်သွားစဉ်သူကိုယ်တိုင်နှင့်ပြောဆိုပြီးဖြစ်သည်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပဲ။ မင်းရဲ့ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစာဖတ်ခြင်းနဲ့စာအုပ်တွေရဲ့အခြေခံလက်လှမ်းမီမှုမှကင်းလွတ်နေတဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ဖို့ပဲ။
ဒါကြောင့်သူဟာသူ့ဘ ၀ ကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်။ သူအလုပ်ပြန်လာတဲ့အခါငါလုပ်နေတာတွေကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငါကလေးတွေရဲ့ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲပစ်မယ်။ ဒါကြောင့်ဒုတိယနှစ်မှာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကနေအလုပ်ထွက်လိုက်တယ်။ GE သည်စာဖတ်ရန်အခန်းခေါ်သည့် NGO တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်၊ ကလေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်နှင့်ဒေသခံဘာသာဖြင့်စာအုပ်များ၊ စာကြည့်တိုက်များနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျောင်းများစတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယခုဖတ်ရန်ဤအခန်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအန်ဂျီအိုတစ်ခုသို့မဟုတ်နီပေါတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်၎င်းသည်အာဖရိက၊ အာရှ၊ တောင်အမေရိကရှိကမ္ဘာအနှံ့တွင်အလုပ်လုပ်နေပြီး၎င်းသည်ဘဝပြောင်းလဲနေသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကနီပေါကိုသွားဖို့အရမ်းလွယ်ကူတဲ့ကျောပိုးအိတ်ခရီးစဉ်ပါ။ tracker ၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲရုံတင်မက။ သူ၏အမည်မှာ OO D. , John Wood ဖြစ်ပြီးသူသည်စာဖတ်ရန်အခန်းကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ အခုသူအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်။ ထိုဥပမာများစွာကိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောသာဓကတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သူ၏ခရီးစဉ်သည်သူ၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရုံသာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိများစွာသောကလေးငယ်များ၏ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဒါကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ
ပြန်လာပါ၊ ဒါပေမယ့်မင်းမထွက်နိုင်တော့ဘူး မင်းသူမရဲ့သတင်းဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ခရီးသွားသတင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ ငါသိတယ်,
ကောင်းပြီ၊ ဒါကအင်ပါယာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကတိုင်ကနေလုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? ငါဆိုလိုတာကမင်းတို့မှာအင်တာနက်ရှိပြီလား ၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရာဖြစ်သော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုသည်။ အဖြူရောင်သဲသောင်ကမ်းခြေများနှင့်လှပသောမြို့ကြီးများ၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့်ဇိမ်ခံဟိုတယ်များအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ပိုရှိပါတယ်။ ထိုအခါငါနီပေါသင်ဤစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည့်ဤနေရာများတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ပုံပြင်တွေကိုပိုရချင်တယ်။ ဒီနီပေါအကြောင်းပြောပြနိုင်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ရဲ့ Podcast ကိုဒီအချိန်မှာရောက်ရတာအရမ်းများတယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ငါတို့စာဖတ်သူတွေကိုအားပေးတယ် အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများ၊ မှတ်ချက်များရှိပါက၊ သို့မဟုတ်သင် Pankaj နှင့်ဆက်သွယ်လိုပါက livestream dot သို့သွားပြီးစာချုပ်ကိုကလစ်လုပ်ရုံဖြင့်သင်၏မေးခွန်းသို့မဟုတ်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်စွာပေးပို့နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ဟာကွဲပြားတဲ့ခရီးတစ်မျိုးကိုအမှန်တကယ်သွားချင်တယ်ဆိုရင်၊ တန်းတူညီမျှမှုကိုစူးစမ်းလေ့လာရုံသာမကနီပေါနိုင်ငံမှာရှိနေစဉ်သင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့လာလိုလျှင်, pancake သည်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်ရမည့်သူဖြစ်သည်။ ငါအရမ်းပျော်စရာမျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါနေရမယ် မကြာခင်မှာမင်းကိုမင်းထပ်ပေး ဦး မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဆက်အသွယ်မပြတ်တော့ပါနဲ့သင့်နေ့ကိုပျော်မွေ့ပါစေ။ ပြီးတော့ပေါလုနှင့်စိတ်ကူးအစားအစာအချို့။ ငါတကယ်အစားအစာကိုလက်လွတ်။ ကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ကြီးကျယ်တဲ့အရာပါ။
သောမတ်စ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါဟာတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပါပဲ ပြီးတော့, ငါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွင်းပိုင်းအသံအတွင်းရှိလူများစွာကိုကူညီနိုင်သေချာပါတယ်။ ဟိမဝန္တာမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် Katmandu မှကျေးဇူးတင်ပါတယ် အိုကေ။ ဂရုစိုက်ပါ။ နုတ်ဆက်ပါတယ် နုတ်ဆက်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နုတ်ဆက်ပါတယ်
နီပေါ Vipassana စင်တာတရားအားထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာဆယ်ရက်သင်တန်းများ။ သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးဤနေရာ၌တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာသည်။ နေ့စဉ်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသည်နံနက် ၄:၃၀ နာရီတွင်စတင်သည်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုဆယ်ရက်လုံးလုံးထိန်းသိမ်းထားသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ကမ်းစာစောင်ကောက်ယူရန်ကန်ပတတ်ရှိ Jyoti Bhawan ရင်ပြင်ရှိ Centre ၏ Kathmandu ရုံး (Sun-Fri4am-30 pm) ကိုကြည့်ပါ။ သင်တန်းအားလုံးကိုလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ဝိပassနာသည်ရှေးအကျဆုံးတရားအားထုတ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂,၅၀၀ ကျော်ကဗုဒ္ဓကပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာကာလကြာရှည်လူသားဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဝိပassနာဆိုသည်မှာအရာရာကိုအမှန်အတိုင်းရှုမြင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသန့်စင်ခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုသည်သဘာဝအရအသက်ရှုခြင်းကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ဤပိုမိုသောသတိထားမှုနှင့်အတူလူတစ် ဦး သည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ပြောင်းလဲနေသောသဘောသဘာဝကိုလေ့လာပြီးထာဝရတည်ရှိမှု၊ ဆင်းရဲခက်ခဲမှုနှင့်အတ္တကင်းမဲ့မှုအခြေအနေကိုရရှိရန်စကြဝuniversalာ၏အမှန်တရားကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။
လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံး (ဓမ္မ) သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြproblemsနာများအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့်ဘာသာရေးနှင့်ဂိုဏ်းဂဏစွဲဝါဒနှင့်မျှမပတ်သက်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်လူမျိုးရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပconflictိပက္ခမရှိဘဲအားလုံးလွတ်လပ်စွာလေ့ကျင့်နိုင်သည်။ မည်သည့်နေရာ၌မဆိုအချိန်မရွေးအားလုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိလိမ့်မည်။
ဝိပassနာသည်လူနေမှုဘဝကိုအနုပညာ၊ ဒေါသ၊ လောဘနှင့်အဝိဇ္ဇာစသည့်မကောင်းသောအကျင့်များမှလွတ်မြောက်စေသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြုသဘောဆောင်။ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Vipassana စင်တာသည် Shivapuri အမျိုးသားဥယျာဉ်၏ဝင်ပေါက်အနီး Budhanilkantha တွင်တည်ရှိသည်။
နီပေါ COVID-19 ကြောင့်စည်းမျဉ်းများ
COVID-19 အတွင်းရောက်ရှိရန်လိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နီပေါခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အပါအ ၀ င်နီပေါအစိုးရ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်သတင်းအချက်အလက်အသစ်မရှိပါ။
စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်ကအစိုးရသည်နီပေါနိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက်သောဆိပ်ကမ်းများအားလုံးသည်အောက်တိုဘာ ၁၆ ညသန်းခေါင်ယံအထိပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ထားသည့်ကန့်သတ်ချက်များရှိနေသောကြောင့်နီပေါနိုင်ငံသားများအားပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
ယခုအချိန်တွင်မည်သည့်နိုင်ငံခြားသားကိုမျှနီပေါနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။ နီပေါအစိုးရသည်သံတမန်ရေးရာ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း ၀ န်ထမ်းများအတွက်ချွင်းချက်အားအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာကနီပေါနိုင်ငံတွင် COVID-19 အတွက်အန္တရာယ်များကြောင်းသတိပေးသည်။